gazety · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny gazety
Miditra vanim-potoana vaovao ny fifandraisana India-Amerikana
Amerika Avaratra29 Novambra 2018
Tany am-piandohan'ity volana ity, nanaisotra ny sazy maherin'ny 30 taona amin'ny varotra nokleary amin'i India ny governemanta amerikana. Nanasonia volavolan-dalàna manome alalana ny fanampian'ny Amerikana ny fandaharan'asa angovo nokleary sivily ao India ny filoha Amerikana Bush.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana26 Novambra 2018
Mumbai sy ny horohoro: Ny ampitso
Azia Atsimo08 Novambra 2018
Nanaitra ny firenena iray manontolo ny fanafihana tamin'ity halehibeny ity. Raha tsy vahiny amin'ny fipoahana baomba sy fanafihan'ny mpampihorohoro i India, dia tsy nampoizina ny toe-javatra momba ny takalon'aina naharitra ela be tao amin'ny toerana malaza iray. Ny fanodinana ny zotra-piaramanidina tamin'ny taona 1999 no takalon'aina farany notantaraina betsaka.
Fifidianana tany Iran: Nanao fanentanana an-tserasera ny mpanohana an'i Ahmadinejad
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana23 Oktobra 2018
Nilatsaka kandida ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana Jona 2009 ny filohan'i Iran Mahmoud Ahmadinejad . Tahaka ireo mpifaninana aminy, niandry ny fankatoavana ofisialy hifaninana tamin'ny fifidianana avy amin'ny Vaomieran'ny Mpiambina izy. Nandritra izany fotoana izany, nanomboka fanentanana antsoina hoe "Manaraka ny Hatsaram-panahy" ireo mpanohana an'i Ahmadinejad .
Bahrain: Marobe ireo tranonkala voakatona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Jolay 2018
Marobe ireo tranonkala nakatona tao Bahrain taorian'ny famoretana vaovao nataon'ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao. Nahantonga ireo tranonkala tahaka ny Google Translate sy ny tranonkala ara-tsosialy, ara-pivavahana, momba ny zon'olombelona sy ny vondrona ara-politika ho tsy azon'ny olona nidirana tao Bahrain intsony ny fanakatonana farany.
Fanehoana ny Fahasamihafan'ny Tolona : SyriaUntold Herintaona Aty Aoriana
Antsafa20 Jona 2018
Syria Untold natomboka herintaona lasa izay, nandinika fomba maro mba hitantarana ny tolona Siriana sy ny endrika fanoharana isan-karazany. Nanadihady an'i Leila Nachawati, mpikambana ao amin'ilay ekipa ny Rising Voices ho fampahafantarana bebe kokoa.
MENA: Mianatra Momba ny Fiarovana Ara-Dizitaly, Amin'ny Aterineto
Fanabeazana09 Jona 2018
Misy filàna fiarovana mihamitombo eny anivon'ireo mpikatroka mba hiarovana ny maha-izy azy no sady manohy ny tolona hisianà tontolo Arabo malalaka. Sehatra an-tambajotra iray maniry ny hanampy azy ireo ho voaaro ny Akademia An-tambajotran'ny Cyber Arabo.
Balkans: Mankatoa ny fijoroan'i Kosovo i Makedonia sy i Montenegro
Eoropa Afovoany & Atsinanana30 Avrily 2018
Tamin'ny 9 Oktobra, ankatoavin'i Montenegro sy i Makedonia ny fahaleovantenan'i Kosovo. Nanamarika ny bilaogera iray fa "kisendrasendra, nampitombo ny isan'ny firenena mankatoa ho 50 indrindra izany."
Thailandy: Famoriam-bahoaka sy ny vaovao farany ao amin'ny Twitter
Azia Atsinanana17 Avrily 2018
Mihodidina ny tranoben'ny Parlemanta ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta ao Thailandy tamin'ny alatsinainy maraina. Notarihan'ny Firaisam-bahoaka ho an'ny Demokrasia (PAD), te-hanongana ny governemanta ireo mpanao hetsi-panoherana. Nafindra vonjimaika tany amin'ny Seranam-piaramanidina Don Mueang ny biraon'ny filoha ao amin'ny firenena.
Fifidianana Amerikana. Maneho Hevitra Izao Tontolo Izao.
Afrika Mainty15 Avrily 2018
Ry mpankafy vaovao politika, henoy! Bilaogy momba ny fifidianana Amerikana ao amin'ny Global Voices, Voices without Votes miasa tsy an-kiato mba hanome anao tsy tapaka momba ireo fanehoan-kevitra manerana izao tontolo izao.